काठमाण्डौ । नेपाली सडकमा कुद्ने कियाको मिड–एसयुभी सेल्टोसको संख्या हजार नाघेको छ । नेपाल प्रवेश गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा नहुँदै हजार युनिटभन्दा बढी सेल्टोस बिक्री भएको हो । सेल्टोस र अर्को मोडल सोनेटले कोरियाली अटो ब्रान्ड कियालाई नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने गाडीको तेस्रो नम्बरमा उकालेका छन् । करिब दुई महिनाअघि नेपाली बजारमा...
जनरल मोटर्सले भारतस्थित अन्तिम प्लान्ट पनि बन्द गर्ने, लद्दाखकाण्डले चिनियाँ कम्पनीसँग डिल भएन
काठमाण्डौ । गाडी निर्माता कम्पनी अटोमोबाइल कम्पनी जनरल मोटर्सले भारतमा आफ्नो अन्तिम प्लान्ट पनि बन्द गर्ने भएको छ। भारत र चीनबीच बढ्दो तनावका कारण जनरल मोटर्सले आफ्नो प्लान्ट बन्द गर्न लागेको हो। यो प्लान्ट डिसम्बरभित्रै बन्द हुने बताइएको छ। जनरल मोटर्सको अन्तिम प्लान्ट भारतको महाराष्ट्रस्थित तालेगाउँमा छ। यो प्लान्टले अघिल्लो...
फोर्ड प्रेमीहरुले टेष्ट ड्राइभ गर्न सक्ने साथै धेरै उपहारहरु जित्न सक्ने
काठमाण्डौ । जी.ओ.अटोमोवाइल्स् प्रा.लि.(जी.ओ.) फोर्ड गाडीको नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेताले हालै फोर्डको २०२१ संस्करण २०२० कै मूल्यमा वुकिङ्ग खुल्ला गरेको थियो । क्रिसमसको उपलक्ष्यमा लविम मलले हरेक वर्षझै गर्ने हर्षोल्लासमय पर्वमा फोर्डले सहकार्य गर्दै विभिन्न उपहारहरु ग्राहकमाझ बाढ्ने भएको छ । साथै यस उत्सवमा फोर्डको २०२१ ...
कमिसन घटाउन र बीमा गरिदिन पठाओ राइडरहरूको माग, नत्र आन्दोलन गर्ने
काठमाण्डौ । पठाओका राइडरहरु कम्पनीले लिने कमिसन घटाउन र बीमाको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी जुटेका छन्। काठमाण्डौको यूएनपार्कमा सोमबार भेला भएका पठाओ राइडरहरुले कमिसन नघटाए र बीमा नगरिदिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्। पठाओले यात्रुले तिर्ने भाडाको २० प्रतिशत रकम कमिसनका रुपमा लिने गरेको राइडरहरुले गुनासो गरेका छन्।...
नयाँ कार किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? ध्यानमा राख्नुस् यी ६ फिचर, यात्रा हुनेछ सुरक्षित र आरामदायी
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा हिजोआज कारका पारखीहरु बढ्न थालेका छन्। नयाँ–नयाँ ब्रान्डका कारहरुप्रति आकर्षण बढ्न थालेको छ। कार बिक्रेताहरुले ग्राहकलाई कार चढ्ने चाहना पूरा गर्न विभिन्न स्किम ल्याइरहेका छन्। कार किन्नुअघि निकै उत्सुकता हुन्छ। तर त्यही उत्सुकताले कहिलेकाहीँ ग्राहकले कारमा रहेका फिचरहरुबारे बुझ्न भुल्न सक्छन्। तर...
अमेजनले ल्यायो शानदार सेल्फ ड्राइभिङ रोबोट्याक्सी, यस्ता छन् दमदार फिचर्स
काठमाण्डौ। विश्वमा निर्माण हुने सवारीसाधनको स्वरुपमा बर्सेनि तीव्रगतिमा परिवर्तन भइरहेका छन्। अब कस्ता खाले सवारीसाधन आउला भन्ने कल्पना गर्न पनि मुस्किल पर्न थालिसकेको छ। यस्तै पत्याउन नसकिने सवारीसाधन अब विश्वले देख्न पाउने भएको छ। त्यो सपना पूरा गरिदिने भएको ई–कमर्स कम्पनी अमजेनले। अमेजनले एउटा युनिक सेल्फ ड्राइभिङ...
आयो चार्ज गर्नै नपर्ने इलेक्ट्रिक कार, यस्ता अन्य फिचर
काठमाण्डौ । विश्वमा अहिले अटोमोबाइल कम्पनीहरु धमाधम इलेक्ट्रिक गाडीहरु निर्माण गरिरहेका छन्। तर इलेक्ट्रिक गाडीहरुलाई लिएर ग्राहकको प्रमुख चिन्ताको विषय भने चार्जिङ नै हुनेछ गरेको छ। अब ग्राहक चार्जिङको तनावबाट मुक्त हुने भएका छन्। गाडी निर्माता अमेरिकी कम्पनी अप्टेराले ग्राहकलाई यो चिन्ताबाट मुक्त गरेको हो। कम्पनीले यस्तो...
निम जि ईलेक्ट्रिक अटो नेपाली बजारमा,सञ्चालन खर्च ७५ पैसा प्रति किलोमिटर मात्र
काठमाण्डौ। नेपालको एक प्रतिष्ठित व्यवसायिक संस्था हिमालय अर्गनाइजेशन अन्तर्गत हिमालय मोटोराड कम्पनीले नेपालमा एक पटकको फूलचार्जबाट १३० किमि गुड्ने केरेला अटोमोवाइल्स लिमिटेडद्वारा भारतमा निर्मित निम जि, ईलेक्ट्रिक अटो नेपाली बजारमा ल्याएको छ। नेपालमा हाल साना तथा ठुला ईलेक्ट्रिक सवारी साधनहरु भित्रिने क्रम तीव्र रुपमा बढेको छ ।...
टाटा मोटर्सको पाँचौ ग्लोबल सर्भिस क्याम्प आजबाट शुरु
काठमाण्डौ । नेपालका लागि टाटा मोटर्स्को आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी टेडिङ्ग प्रा.लि.ले ग्लोबल सर्भिस क्याम्प २०२० आजदेखि आगामी पुस ८ गतेसम्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यो वर्षको ग्लोबल सर्भिस क्याम्पको उद्घाटन सिप्रदीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभ गरिएको थियो । उक्त उद्घाटन समारोहमा रुद्ररुप मैत्रा...
आगामी आइतबारदेखि मनकामना केबुलकार सञ्चालनमा आउने
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण बन्द रहेको नेपालको पहिलो केबुलकार मनकामना केबुलकार आगामी आइतबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । मंगलबार मनकामना मन्दिर क्षेत्र विकास समितिको अगुवाइमा बसेको स्थानीय तह सहितको सरोकारवालाको बैठकको निर्णय अनुसार मनकामना मन्दिर र बजार खोल्ने जानकारी भए पश्चात् मनकामना केबुलकार पनि एकै साथ...
फोर्ड इकोस्पोर्ट २०२१ संस्करण २०२० को मूल्यमा वुकिङ्ग खुल्ला
काठमाण्डौ । जी.ओ. अटोमोबाईल्स प्रा.लि. (जी.ओ फोर्ड) फोर्ड गाडीको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेताले नयाँ फोर्ड इकोस्पोर्ट २०२१ संस्करण वुकिङ्ग खुल्ला गरेको छ । सन् २०१३ मा बिक्री शुरुवात भएको र सन् २०१७ मा प्रमुख अद्यावधिक (ड्रयागन सीरीज इन्जिन जडित) फोर्ड इकोस्पोर्ट कम्प्याक्ट एसयूभी सेगमेन्ट/श्रेणी मा नै खेल परिवर्तकको रुपमा आएको थियो...
सिट्रोन गाडी सन् २०२१ मा नेपालमा आउँदै
काठमाण्डौ । नेपालमा फ्रान्सेली गाडी ब्राण्ड प्युजोको अधिकृत विक्रेताका रुपमा बजार व्यवस्थापन गरिरहेको मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई ग्रुप पीएसए, फ्रान्सले आफ्नो सिट्रोन ब्राण्ड सवारी साधनहरुको अधिकृत विक्रेताको रुपमा नियुक्त गरेको छ । सिट्रोन एक फ्रान्सेली अटोमोबाइल निर्माता कम्पनी हो जुन सन् १९१९ मा फ्रान्सेली उद्योगपति...
फोटनको १५ सिटे कमर्सियल गाडीको मूल्य र विशेषता सार्वजनिक
काठमाण्डौ । फोटन मोटर्सका लागि नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता एम.ए.डब्ल्यू. भृद्धि कमर्सियल भेइकल्स प्रालिले नयाँ गाडी भ्यू सीटू फिप्टिन सिटर (View C2 15 Seater)को मूल्य र विशेषता सार्वजनिक गरेको छ। यो गाडीको अनुमानित मूल्य ५३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । आर्कषक लुक र स्टाईले गर्दा सबैको आखाँ यो गाडीमा सजिलै जान्छ । जसरी फोटनले आफ्नो गाडीहरुमा...
काठमाण्डौ । टाटा मोटर्सले ६ सिटे टाटा ग्राभिटास लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। टाटा ह्यारियरको ६ सिटे भर्जनलाई कम्पनीले टाटा ग्राभिटासका नामबाट लन्च गर्ने तयारी गरेको हो। यो कम्पनीको फ्लेग्सिप एसयूभीका रुपमा लन्च हुनेछ। कम्पनी टाटा ग्राभिटसलाई यही वर्षको अन्त्यसम्म लन्च गर्न चाहन्थ्यो। तर अब कम्पनीले यो कार आउँदो वर्षको सुरुआतमै लन्च...
चौबीस घण्टामा ६८९१ संक्रमित डिस्चार्ज
निक्षेप र कर्जामा एनआइसी एशियाको 'चमात्कार' !
रुरु जलविद्युतको मूल्य उचालिनु स्वाभाविक कि अस्वाभाविक ?
भारतमा बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिने क्रम बढ्दो, के यो खतराको संकेत हो ?
राष्ट्रबैंकको विश्लेषण: ४% को वृद्धिदर कठीन, 'ब्याजदर बढ्दैन, कर्जा बिस्तार शिथिल हुनसक्छ'